Sida loo sameeyo imtixaanka Nadiifi:
dhaqaajinta -Here aynu eegno sida ay u fududahay in wadid, jiid iyo mishiinka kor. Waana imtixaanaynaa on katiifadaha iyo sagxadaha adag iyo raadiyo dhibaatooyinka sida overbalancing on mashiinada qumman, dabacsanaan iyo arrimaha guud sida madaxdii "nqoday" on dabaqyada adag ay sabab u tahay madaxdii nadiifiye liidata loogu talagalay.
Rooga nadiifinta - waana imtixaanaynaa isticmaalaya budo cad on Gogol madow iyo baaritaan ka dib markii saddex howlgallada, halkaas oo mid ka mid ah howlgal kor iyo hoos guud ahaan degaanka waa.
Nadiifinta Edge - Baaritaankaan wuxuu eegayaa sida fiican u mishiinka nadiifiyaa ilaa cidhifka loox albaaka ka hor inta aadan u leeyihiin in ay door biday in ay qalab crevice ku takhasusay.
Nadiifinta sagxada adag - Waxaan qaban baaritaano la midka ah ee dabaqyada adag iyo eegno sida ugu wanaagsan ee huufarka ah nuugayo boodh ka dillaacsan iyo gol daloolada ku jirta sagxadda dhulka.
Butros nadaafadda timaha - Muddo intee le'eg iyo sida badan howlgallada ay qaadato si aad u nadiifiso goobo 40cm-ballaciisu yahay ee shanleyn-in timaha xayawaanka.
Nadiifinta sallaankii - Waxaan u aragnaa sida ay u fududahay in la nadiifiyo sallaankii la isticmaalayo qalab la siiyo. Waxaan fiiro gaar ah sida dheer tuubadu fullaaci kara waa iyo sida ay u fududahay waa in ay qaadaan huufarka haddii aad u baahan tahay inaad.
Sawaxanka - Waxaan la cabbiri doonaa sida qeylo mishiinka waa desibelo diiwaan heer madaxa.
Waxaan sidoo kale ka fiiri si aad u aragto waxa accessories waxaa ka mid ah, sida ugu wanaagsan ee ay u shaqeeyaan iyo sida boosaska mishiinka waa. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah lagu nadiifiyo vacuum ku fiican yihiin shaqooyin gaar ah, halka qaar kalena ay leeyihiin badan oo qalab in la dhigan iyaga u furan yahay noocyo kala duwan oo dheeraad ah.
Faahfaahinta kale ee aan hubiyo waxa ka mid ah oo dhererkiisu xadhig on nadiifiyo vacuum isku tidcan, nolosha batteriga ku daydo kayd iyo sida ay u fududahay waa in la madhin daydo bagless.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah, fadlan la soo xiriirtaa: 86 574 63932251